Sphinx को बिल्लियों को नस्ल
Sphynx नस्ल को बल बिल्लहरु अत्यन्त अनुकूल र उत्तेजित हुन्छन्। यी प्राणीहरू हग्सको धेरै मनपर्ने हुन्छन् र लगातार आफ्नो मालिकको उत्साहित गर्न प्रयास गर्छन्। सबै को लागि, यो बिल्लियों रोमन मा धेरै को शौक हो, किनकि उनि अपरिचित अतिथि को गाल मा रक्सी ले सकते हो। तिनीहरू सबै आक्रामक छैनन् र ऊ छाला, ऊनबाट निस्कन्छ, स्पर्शको लागि धेरै सुखद लाग््छ। Sphinxes कति जीवित बिल्लियों छन्? उनीहरूको जीवनको अवधि नलीमा निर्भर हुँदैन, उचित हेरचाह तिनीहरूले जस्तै, सबै बिरालोहरू 18 वर्षसम्म बाँच्न सक्छन्।
Sphynx नस्ल को एक बिल्ली को हेरविचार कसरि?
Sphynx नस्ल को बिरालो विशेष विशेष हेरविचार को आवश्यकता छैन, किनकि यो पहिलो नजर लगाउन सक्छ। ऊनको अभावले समय र प्रयासलाई महत्त्वपूर्ण बनाउँछ, किनकि तपाइँ निरन्तर दबाइबाट जोगिन सक्नुहुनेछ, र अपार्टमेटले समय समयमा ऊन कोटहरू इकट्ठा गर्न आवश्यक छैन।
छाला। ऊनीको अनुपस्थिति जनावरको छालाको निरन्तर र सावधान हेरचाह मानिन्छ। बिरालोको छालाको मुख्य विशेषता यो निरन्तर पसीन्छ। परिणामको रूपमा, तपाईंको पादरी गहिरो देखिन्छ। आवंटित पसीना, अन्य चीजहरू बीच, हल्का ऊतकहरूमा स्पट छोड्न सक्दछ। बिराला-स्पिनक्सहरूको लागि कपडाहरू खरीद गर्दा यो ध्यानमा लिनु पर्छ। छाला लगातार स्पंज स्पंज संग सफा गर्नु पर्छ। स्नानलाई हप्तामा एक पटक भन्दा बढी अनुमति दिइएको छ। एक स्नान स्नानको लागि न्यानो पानीको तापमान 36-39 डिग्री सेल्सियस छ, पानी यति धेरै हुनुपर्छ कि यो केवल बिरालो छाती पुग्छ। एक बिरालो बिरालोको लागि यो योग्य गुणस्तरको बाल शैम्पू सम्भव छ। चिसो अवधिको समयमा घर छोड्नु भन्दा पहिले तपाईले बिरालो-स्पिनक्सको लागि लुगा लगाउनैपर्छ, अन्यथा तपाईले चिसोलाई ख्याल गर्नुपर्दछ।
आँखाहरु। Sphynx नस्ल को बिल्लियों को पनीर छैन, त्यसैले तिनीहरू प्रदूषण को आँखा मा लगातार प्रकट हुन्छन्। यदि डिभाइस ब्राउन वा पारदर्शी हुन्छ भने उत्तेजनाको कुनै कारण छैन। आफ्नो आँखालाई पकाएको पानीमा वा चामोमिलको इन्फ्युजनमा डुबेको एक कपास स्वाब संग पकाउनुहोस्।
एर्स। यो प्रजातिको बिरालोहरुमा अक्ष पर्याप्त हुन्छ र धेरै चाँडो गहिरो हुन्छ। ती जनावरहरू हानिकारक बनेका हुन्छन्, ती हप्तामा 1-2 पटक। कपास स्वाबहरू प्रयोग गर्नुहोस्, तर ती धेरै गहिरो मत राख्नुहोस्, अन्यथा तपाईं आफ्नो भित्ता कान घृणा गर्नुहुन्छ र शताब्दी कमाउनु हुन्छ।
दाँत यदि तपाइँ बिरालोको दाँतमा पलक फेला पार्नुहुन्छ भने यसलाई सफ्ट टूथब्रशसँग सफा गर्न सकिन्छ। नियमको रूपमा, पशुको मुखबाट गंध अप्रिय छ, गम पीला गुलाबी हो। दाँत सफा गर्न, तपाइँ विशेष खरिद फिडहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ वा बिरालो केही मुर्दा गर्दनहरू उल्टाउनुहोस्।
बाहिरको बिरालोको छेउमा खसेको ग्रंथिहरू छन्। स्पिनक्सहरूमा, यी ग्रंथहरू कपालसँग ढाक्न सक्दैनन्, त्यसकारण पूरै समय-समयमा एक degreasing एजेन्सीसँग सफा हुनुपर्दछ।
Sphynx बिल्ली: खाना। यस जातिको बिरालो राम्रो भूख छ र लगभग सबै चीज खान्छ। चूंकि छालाको कपालको बाक्लो नपढिएको हुन्छ र शरीर को तापमान को थोडा बढाएको छ, चयापचय थोडा तेज हुन्छ। खाना सन्तुलन हुनुपर्छ। यदि तपाईंले खरिद गरेको खानासँग बिल्ली फिड गर्ने निर्णय गर्नुभयो भने, यो उच्चतम गुणस्तर हुनुपर्छ। खानामा, यी पाल्तुहरूले पूरै अप्रत्याशित उत्पादनहरूमा प्राथमिकता दिन सक्छन्: कर्कर, अंगूर, मिठाई पनि। यो सबै पालतू जान सकिन्छ, तर रैठबाट बच्न मध्यम मात्रामा।
यदि तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईंको बिरालो लगातार निरन्तरता दिँदै आएको छ र धेरै दृढता प्राप्त गर्न, सम्भवतः, एस्ट्रास सुरु भएको छ । यो वर्ष क्रियान्वित भएको बेला स्पिनक्सहरूको बिरालो सम्भव छ।
बिल्लियों-स्पिनक्सहरूका लागि नाम
बिल्लियों-स्पिनिक्सको लागि नामहरूको छनौट एक धेरै रचनात्मक प्रक्रिया हो। यस्तो सुन्दर सुन्दर मार्शुस वा कर्कस्क्रि कल गर्दै जिब्रो नबनाइन्छ। त्यसोभए तपाइँ कसरी बिल्ल-स्पिनक्स लाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ? धेरैले मिस्र देवताहरूको नाममा छनौट गर्छन्। यो सबभन्दा रोचक तरीका हो, तर परम्परागत विधिहरू एकदम स्वीकार्य छन्। बिरालो र यसको प्रकृतिको व्यवहार अध्ययन गर्नुहोस्, यसले नामको छनौटलाई प्रस्ट गर्न सक्छ।
कुत्तों को ठूलो नस्लों - दुनिया को सबै भन्दा ठूलो कुकुरहरु को शीर्ष 10 जुन उनको आकार द्वारा सबै को विजय प्राप्त गर्दछ
रातो-घण्टी कछुएको हेरविचार र रखरखाव
कष्टबाट अलग छ?
कुत्तों मा डियोरोफेरीसिस
कुत्तों मा कुत्तों - लक्षण
बिरालोहरु मा कान शिखर
घर मा एकहाटिन संग घोंघे को हेरचाह - रहस्य र सामाग्री को नग्नता
एक प्रदर्शनी को लागि एक कुत्ते को तैयारी - तपाईंलाई जीत को आवश्यकता छ?
फारसी बिल्लियों - नस्ल को वर्णन
बौने पिनचर - नस्ल का वर्णन
हँसिलो जीवनलाई लामो पार्छ
टेरियर्स - चट्टान प्रजातिहरु
पिशाच डायरी स्टार क्लेयर होल्ट फेरि विवाहित हुन्छ
ओवनमा आलुहरू कसरी कत्तिको स्वादिष्ट छ?
कम हेल्प श्वाइज 2013
कुकीहरूका लागि फारमहरू
Ovulation पछि ब्राउन निर्वहन
अदालतले हिंसामा क्रस ब्राउनको संदिग्धलाई कारकोसी ट्रेनमा पुग्न अस्वीकार गर्यो
विवाहको पोशाक संग्रह 2014
घर मा चीज
दाँतको फ्लोरोसिस - सबै प्रकारको बीमारीको कारण र उपचार
ढिलाइ पैट्रिक स्विस को श्रीमान लालच को दोषी ठहराया थियो
कुप्रती कसरी फर्किने?
हिँड्दा क्यालोरीको उपभोग
समुद्री खोल वजन खोने को लागि
हर्गेले गले लगाए
के भयो भने सबै जीवनमा खराब छ?